Ndigadzirise dhizi ini pc que el bloqueo dinamico hapana funciona
The Dynamic Lock chimiro che Windows 10 zvinoita kuti zvive nyore kuti vashandisi vakwanise kukiya makomputa avo pavanenge vangotama kubva pavari. Ivo havadi chero madhiri akakosha se IR Makamera kuti ushandise maitiro aya. Kana komputa yavo ichitsigira Bluetooth, vanogona kushandisa chinhu ichi. Kunyangwe kompiyuta yavo isina Bhaisikoputa, ivo vanongogona kushandisa chechitatu-bato rekunze reBluo dongle voshandisa ivo sezvazvinoreva.
Windows 10 Dynamic Lock haisi kushanda
Kutanga pane zvese, isu tinokurudzira iwe denga Shanduro Kudzorera purogiramu. Nekuti tichave tichitamba neRegistry mafaera uye kugadzirisa mamwe akakosha Windows marongero. Mushure mekuita izvi, isu tichaenderera mberi pakutsvaga kwedu kugadzirisa yedu nyaya ye Windows 10 Dynamic Lock isingashande mushure mekuvandudza.
1] Uchishandisa iyo Zvirongwa App
Tanga nekurova hono KUFUNGA + I bhatani mabhatani kuvhura maSystem app.
Zvino enda ku Maakaunzi> Sarudzo dzekupinda. Tevere, peta pasi kune chikamu chinodaidzwa se Simba Dhivha.
Ita shuwa kuti cheki bhokisi rinoti tendera Windows kuvhara otomatiki chako kana iwe usipo is checked.
Imi mose makagadzikwa. Iwe unogona ikozvino kubuda iyo Zvirongwa app.
Kana nekuda kwechimwe chikonzero mhinduro iri pamusoro haina kushanda, uye iwe ukaona kuti iyo Dynamic Lock yakabviswa grey kana kushayikwa, ipapo ungangoda kunetsa kumberi.
2] Batanidza yako Bluetooth Kudzivirira & Dzokorora mutyairi
Kana iwe ukaona iwo unotevera iwo meseji mumaSething kana kuti Yeziviso Center:
Dynamic Lock haisi kushanda nekuti PC yako haina dhiza rakapetwa
ipapo iwe unofanirwa kuvhura Zvirongwa> Midziyo> Makaralı & mamwe majaira. Pano ita chokwadi chekuti Bluetooth yakavhurwa uye dhiraivha iyo Bluetooth kifaa.
Kana ukazarura iyo Windows Defender Security Center, iwe uchawana yambiro ipapo futi.
Kana iwe ukanyevera pakanzi Wedzerai Bluetooth kifaa, iwo maratidziro eBluetooth anozovhura uye iwe unogona kubatanidza mudziyo.
3] Reinstall Bluetooth mutyairi
Kana izvi zvikasabatsira, ungangoda kudaro sunungura uye wobva wadzoreredza ako maBluidhi eDrivers. Unogona kuzviita kuburikidza neDhija Manager.
4] Kushandisa Registry Editor
Hit the WINKEY + R bhokisi rekubatana kuti utange Run operative, tape mukati regedit ndokurova Enter. Dzvanya Ehe yeUUV kana yeAunti Akaundi Dzvanya Prompt yaunowana.
Kamwe Registry Mharidzo inovhura, famba uchienda kune inotevera kiyi nzvimbo-
Tarisa kumusoro kune DWORD yakadanwa EnableGoodbye kurudyi kurudyi.
Ita shuwa kuti kukosha kwayo kwakatemerwa 1 iyo inogoneswa. 0 ndeyekuremara.
Vhara iyo Registry Mharidzo uye tangazve komputa yako kuti shanduro dzitore kushanda.
5] Tarisa Kugadziriswa Kweboka
Kana yako vhezheni ye Windows 10 ngarava neIboka Policy Edhiyo, Mhanya gpedit.msc kuti avhure.
Iye zvino, enda kune iyo inotevera nzira mukati meGroup Policy Edhira-
Kugadziriswa KwemakomputaMatemplate AnotungamiraWindows zvinoriumbaWindows Mhoroi Bhizinesi
Zvino, kurudyi kurudyi Panera, tarisa kune yakapinda inonzi Gadzirisa zvinhu zvine simba rekuvhara zvinhu.
Dzvanya kaviri pairi uye iwe uchaona hwindo idzva ropera.
Kana iwe ukagonesa ino gadziriso, iyi chiratidzo mitemo inoongororwa kuti ione kusavapo kwemushandi uye nekukiya dhizaini ipapo. Kana iwe ukatadza kana kusaronga ichi gadziriso, vashandisi vanogona kuenderera nekukiya neziripo zvekuvhara nzira.
Zvingave Hazvina kugadzirirwa or akwanise, asi hazvifanirwe kuiswa Akaremara.
Sarudza bhatani reRadio akwanise, isa iyo Mitemo Yechiratidzo uye tinya pane OK.
Buda iro Gurukota rePurogiramu uye dzokorora kombiyuta yako kuti shanduko dziitike.
Regai tizive kana izvi zvakabatsira.
Nzira Yokugadzirisa Dynamic Lock In Windows 10
Gadzirisa RPC server haina kuwanikwa kukanganisa mukati Windows 10